Sarudzo dzeKutsvaga Achamirira Democratic Party Dzonakidza
Kukadzi 20, 2020
Sarudzo dzekutsvaga achamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri weAmerica muna Mbudzi, dzava kutsviriridza zvichitevera kupinda musarudzo idzi, kwevaimbove meya weguta reNew York, VaMichael Bloomberg.
VaBloomberg, avo vanove shoroma inotyisa, havana kumhanyira kupinda musarudzo yekutsvaga achamirira bato ravo musarudzo yemutungamiri wenyika, uyo achakweshana zvine mutsindo nemumiriri webato reRepublican Party, Va Donald Trump.
VaBloomberg vakazivisa muna Mbudzi gore rapera kuti vari kupinda mudariro, ndokushandisa mari inodarika mazana mana emamiriyoni emadhora, vachizvishambadza. Mari iyi ndeyavo.
Shoroma iyi haina kupinda musarudzo dzakaitwa kuIowa neNew Hampshire, uye haisiwo kupinda musarudzo dzichaitwa kuNavada neSouth Carolina, ichimirira sarudzo dzichaitwa muna Kurume, apo matunhu gumi nemana achasarudza munhu waanoda kuti amirire bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri weAmerica.
Pakangoisa VaBloomerg gumbo ravo mudaririo rekukwikwidza mubato ravo, vamwe vanga varimo kare vakaita saVaBernie Sanders, avo vanomirira Vermont mudare re Senate, pamwe naAmai Elizabeth Warren, avo vanomirira Massachusetts mudare reSenate, vakabva vatanga kubvarura bvarura nhoroondo yaVaBloomberg.
U.S. Democratic 2020 presidential candidate Senator Bernie Sanders speaks at a campaign rally in the Tacoma Dome in Tacoma, Washington, U.S. February 17, 2020. REUTERS/Jason Redmond
Vachitaura pamberi pehurongwa hwekuedzana pfungwa munyaya dzematongerwo enyika muNevada, VaSanders vakati kuti bato ravo rikunde VaTrump, rinoda munhu anokwanisa kuunganidza vanhu vakawanda zvisati zvamboitika munhoroondo yeAmerica.
VaSanders vakati VaBloomberg munhu anozivikanwa pavaive meya weNew York nekudzika mitemo yekumisa nekusecha vanhu vatema, pamwe nemaLatino vachiita izvi nenzira isina kunaka. Vakati kuita kwakadai hakukwanisi kunza vanhu vakawanda kuti vanovhota kuitira kuti VaTrump vabviswe pachigaro muna Mbudzi.
Asi VaBloomerg vakavhika zvibhakera zvemashoko aVaSanders vachiti VaSanders, avo vari kutungamira mutsagiridzo dzevavhoti dzakaitwa, vakasarudzwa semumiriri weDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika, America ichange iina VaTrump kwemamwe makore mana anotevera.
Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika, uye vari nhengo yeZanu PF, VaFrenk Guni, vanoti zviri pachena kuti mutambo mukuru uri pakati paVaSanders naVaBloomberg, kunyange hazvo zviri kuratidza kuti pari zvino VaSanders vane vatsigiri vakawandisa.
VaGuni vanoti, semaonero avo, VaSanders naVaBloomberg vanofanirwa kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika vakabatana kuitira kuti vakunde VaTrump.
Vamwe vari kukwikwidza musarudzo yeDemocratic Party vanoti; vaimbove mutevedzeri waVaBarack Obama, VaJoe Biden; seneta weMinnesota, Amy Klobuchar, pamwe nevaimbove meya weSouth Bend ku Indiana, uye ari ngochani, Pete Buttigieg.
Bato reDemocratic Party rine ma delegates 3,979, uye kuti munhu atambirwe semunhu anofanirwa kumirira bato musarudzo yemutungamiri wenyika, anofanirwa kuwana ma delegates chiuru nemazana mapfaumbamwe nemakumi mapfumbamwe (1,990).
Pamusoro pema delegates, kunewo ma super delegates zvokuti panozoitwa musangano mukuru wekutsvaga mumiriri webato we Democratic Convention muna Chikunguru kuWisconsin, panofanirwa kunge paine ma delegates nema super delegates anosvika zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi mashanu, uye munhu anosarudzwa pamusangano uyu, anofanirwa kuwana mavhoti zviuru zviviri nemazana matatu ane makumi manomwe nematanhatu (2,376 votes).